China Syrup Ịsa Na -ejuputa igwe na -emepụta igwe na ndị na -eweta ya | IVEN
Sirop (Liquid & ntụ ntụ)
Maka sirop akọrọ ma ọ bụ mmepụta sirop mmiri mmiri, karama 50-500ml.
Ijikwa na ịsacha Kalama Sirop
Dabere na karama plastik ma ọ bụ karama iko, anyị na -akwadebe ịsa ikuku Ionic ma ọ bụ ọdụ nsacha Ultrasonic, iji jide n'aka na teknụzụ kachasị dabara maka ịsa karama sirop.
Mgbe ịsachara karama, karama na -aga n'ọdụ ụgbọ mmiri. Mkpọ ntụ na -ejuputa ijuju, yana iji mmiri mgbapụta peristaltic, nkenke zuru oke, yana njikwa ugboro, imepụta usoro ọsọ ọsọ, ịgụta akpaka. Ọ nwere ọrụ nkwụsị akpaaka, enweghị karama enweghị ndochi.
Na njikwa okpu
Nhọrọ ihicha, ebe nkwụsị
Ọnụ ego ntinye aka dị elu
IVEN Ịcha mmiri sirop na -ejuputa uru igwe
1.Ndị ahaziri iche site na karama 3000-12000/elekere.
2.High akpaaka, ezi ọrụ usoro na njikarịcha nke mwekota.
3.Dị dabara maka ụdị sirop dị iche iche, akọrọ na ụdị mmiri mmiri.
4.Intelligent & Humanized Operation System. Nhazi mmadụ mere maka ọdụ ọ bụla, njikwa PLC +HMI.
5.Ọ nweghị karama enweghị ndochi, ọ nweghị karama enweghị mkpuchi.
6.Nke zuru oke zuru oke na ọnụego ruru eru.
Ụdịdị dabara adaba. S Mmiri mmiri-50-500 ml
Ọsọ na -arụ ọrụ 3000-12000pcs/elekere
Na -ejuputa ụzọ na izi ezi Ntụ ntụ: nkpuchi iju, ± 2%
Ngwọta mmiri mmiri: njuputa mgbapụta peristaltic, ± 2%
Usoro ntinye Ihe mkpuchi
Ike 380V/50HZ, 19KW
Ịchịkwa ọsọ Njikwa ugboro ugboro
Ọrụ oghere Dị ka ikike dị iche iche si dị
*** Mara: Ka ngwaahịa na -emelite oge niile, biko kpọtụrụ anyị maka nkọwapụta kachasị ọhụrụ. ***
Nke gara aga: Sistemụ nkwakọba akpaghị aka
Osote: Ngwakọta Ngwakọta Mgbakọta